राष्ट्रपतिदेखि सांसदकाे समेत १८% ले तलब वृद्धि, कसले कति पाउने भए त ? - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्रपतिदेखि सांसदकाे समेत १८% ले तलब वृद्धि, कसले कति पाउने भए त ?
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।
याे समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिईएकाे हाे ।
सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक (कर्मचारी) हरूको तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको २० र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यति बेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धि गरेको थिएन । पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिने भएकाले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धि नगरिएको हो ।
याे पनि पढ्नुस नीजि स्रोतका शिक्षकले पाएनन् १८ महिनासम्मको तलब !
याे पनि पढ्नुस वडाध्यक्षको ५ वर्षको तलब दलित समुदायलाई
याे पनि पढ्नुस ९ महिनादेखि शिक्षकले पाएनन् तलब